Sida loogu isticmaalo macruufka 'Memoji Stickers' ee iOS 13 barnaamij kasta | Wararka IPhone
Waqtiga la bilaabayo barnaamijka iOS 13 ayaa soo dhowaanaya waana inaan u diyaar garowno waxa nagu soo food leh. Waxaa jira isbeddelo badan oo aan ka helno nidaamka cusub ee Apple ee ku shaqeeya laakiin maanta waxaan arki doonnaa sidee u isticmaali karnaa Memoji Stickers farriimaha, shabakadaha bulshada sida Facebook, Twitter ama xitaa WhatsApp.
Sida cad Kuwa haysta noocyada beta ee iOS 13 lagu rakibay waxay hadda isticmaali karaan Kuwan Memoji, laakiin kuwa naga mid ah ee aan haysan betas waxay helayaan dhamaan macluumaadka hal mar waana sababtaas awgeed waxaa laga yaabaa inay faa'iido leedahay in lagu cusbooneysiiyo xusuusta hawlgalkeeda nooca casharradan fudud.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in tani ay ahayd mid ka mid ah waxyaabihii ugu hadal haynta badnaa ee ka soo baxay dhacdadii bishii Juun ee la soo dhaafay markii la qabtay sannadkan WWDC. IOS 13 iyo iPadOS waxaan ku isticmaali karnaa Memoji Sticker noo gaar ah, u habayn ka dibna si fudud ugu wadaag barnaamijyada kala duwan ee dhaafsiisan Fariimaha Apple. Tan awgeed waa inaan raacnaa dhowr talaabo oo fudud oo aan hadda kuu sheegayno.
Waxa ugu horreeya waa in la furo barnaamijka farriimaha iyo dhagsii "emoji" bidix hoose:
Hadda waa inaanu abuurnaa ama raadinaa Memoji-gaaga adoo raacaya tallaabooyinka adigoo gujinaya "+". Markii la abuuro, waxaan bilaabi karnaa inaan ku raaxeysto Kuwan Memoji-ka ah astaamaha u muuqda marka aad gujineyso calaamadda App Store haddii aan ku jirno barnaamijka Farriimaha, kaliya astaanta dhexe ee sawirka hoose:
Markii aan ku riixno kumbuyuutarka iOS 13 markii ugu horeysay waxaan arki doonaa ogeysiis ku saabsan Istiikaarada Memoji ee cusub, sidaa darteed waa la isticmaali karaa wakhti kasta.
Kuwan cusub ee Memoji-ka ah waxaa lagu heli karaa iyaga oo wata emoji-yada aan horay u haysanay iyo in aan ugu adeegsanno barnaamijyada waa inaan gujino wejiga emoji-ka oo aan u dhaqaaqno dhinaca midig si aan uga dhigno iyaga. Way fududahay waxaana loo isticmaali karaa barnaamij kasta ku raaxayso kuwan Lambarrada Memoji-ka cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo isticmaalo Istaraatiijiyada Memoji ee iOS 13